UMessi uzokwenza esinye isivumelwano neBarcelona | News24
UMessi uzokwenza esinye isivumelwano neBarcelona
Spain – Isikhwishikhwishi somdlali weBarcelona, uLionel Messi, kulindeleke asayine enye inkontileka ezomgcina kule kilabhu egijima kwi-La Liga kuze kube unyaka ka-2021.
Kuzoba nethuba lokuthi iphinde ivuselelwe ngomunye unyaka owodwa uma isifika ekugcineni, ngokwemithombo yezindaba eSpain kanye naseBritain.
Lo mdlali osewine indondo yeBallon d'Or amahlandla amahlanu usebe kwiBarcelona cishe iminyaka engamashumi amabili, njengoba aqala ezinhlakeni zaleli kilabhu zokuthuthukiswa kwentsha ukuze agcine esengomunye wabadlali asebebe nempumelelo enkulu emhlabeni wonke futhi abaziwayo.
OLUNYE UDABA:Sishumpulwe ikhanda isichuse sikaMessi
Lo mdlali ophinde adlalele iqembu lesizwe e-Argentina kulindeleke ukuthi asayine ngokusemthethweni isivumelwano uma ngabe ebuyela kule kilabhu ezoziqeqesha ngaphambi kokuba kuqale isizini kanti kubikwa nokuthi imali yokumkhulula kule kilabhu isinyuke yaze yafinyelela ku-300 million euros ($340.65 million).
Lo mdlali ongomunye wabadlali abakhulu ebholeni noneminyaka engu-30 ubudala, uyena ohamba phambili ngokushaya amagoli kule kilabhu kanye nasezweni.
Useshaya ngenqwaba yezicoco okubalwa kuzo isicoco seligi yaseSpain amahlandla angu-8 kanye neChampions League amahlandla amane neBarcelona.